တရုတ်နိုင်ငံသည် HY1003A-098 စက်ရုပ်တံဆိပ်ရိုက်သည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Yunhua
အမြန်ဆုံး၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်တံဆိပ်ရိုက်နိုင်သောစက်ရုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် HY 1003A-098 သည်လက်မောင်းလက်လှမ်းမမီနိုင်သော်လည်းသေးငယ်သည့်အလေးချိန်ဖြင့် application များစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အမြဲအသုံးပြုလိမ့်မည်။ CNC တံဆိပ်ရိုက်စက်နှင့်အပြည့်အဝညှိနှိုင်းနိုင်သည့်အချက်ပြဖလှယ်မှုမှတဆင့်ပုံနှိပ်စက်နှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
6 3KG ± 0.03 1.6kva 0-45 ℃စိုထိုင်းဆမရှိပါ 63kg မြေပြင်၊ နံရံ၊ မျက်နှာကျက် IP65
Q1 ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုလုံးပေးပါသလား။
A. ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သီးသန့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရှိပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားသူတို့ကူညီလိမ့်မည်။
Q2 ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားခြင်း
A. စက်ရုပ်ကိုလေ့လာရန်စက်ရုံသို့ ဦး စွာ လာရောက်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အခမဲ့သင်တန်းတက်ပါမည်။
Q3 ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်မှန်ကန်သောပုံစံကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
A. ပထမ ဦး စွာသင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုများစွာရှိသည်။ ထို့နောက်ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်အရစက်ရုပ်၏ပမာဏကိုရွေးချယ်သည်။
Q4 ။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်စတင်လိုပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကောမည်သို့နည်း။
A. စက်ရုံများစွာတွင်အလားတူလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အချက်အလက်နှင့်တံဆိပ်တုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်လုပ်ဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ အကဲဖြတ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြေတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်၊ ကမ်းလှမ်းမှုများကိုဝေမျှပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစတင်မည်။
Q5 ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်သာအထူးရောင်းဝယ်သူလုပ်နိုင်ပါသလား။
ရှေ့သို့ စက်ရုပ် HY1005A-085
နောက်တစ်ခု: palletizing စက်ရုပ် HY1165A-290